zeus III (विज्ञान खेल) |
zeus III (विज्ञान खेल)
तपाईं दुवै पीसी र मोबाइल उपकरणहरूमा संचालित र अकल्पनीय मुक्त स्पिन सुविधाहरू प्रदान गर्ने एक अनलाइन स्लट फेला को खोज मा हो? त्यसपछि zeus III (विज्ञान खेल) अनलाइन स्लट आफ्नो गन्तव्य हो! यो WMS खेल विकास एक अद्वितीय अनलाइन स्लट छ, जो नवीन भिडियो खेल र अनलाइन खेल संग आउँदै लागि जानिन्छ.
zeus III (विज्ञान खेल) तपाईं एउटा रमाइलो 6-रील प्रदान गर्दछ र 192 betline platform to put lots of money at stake and winavery big amount per spin. तपाईं रील संरचना र यो विशाल खेल progresses बाटो हेर्न गर्दा तपाईं मक्ख पर्नुहुनेछ हुन सक्छ.
खेल गरेको विषय र प्रतीक:
Zeus III गरेको विषय ग्रीक देवताहरूको र आफ्नो युग मा आधारित छ. यो स्पष्ट ग्रीक र बादल पुरातन मन्दिर रील वरिपरि भटक पृष्ठभूमिमा देखिने छ. वास्तवमा, रील प्रति रील वृद्धि पुरा स्क्रीन को पङ्क्तिहरू संख्या रूपमा कवर. सबै आवश्यक कार्य स्क्रिनको बाँया तर्फका देखिने छन्, जो स्वतः प्ले समावेश, शर्त आकार, paylines आदि.
प्राचीन ग्रीक को सबै प्रसिद्ध वस्तुहरू प्रयोग गरिन्छ zeus III (विज्ञान खेल) उच्च-मूल्य प्रतीक. यो मुख्य रूप प्राचीन सिक्का समावेश, एक फूलदान, एक जहाज, एक टोप, को उमंग र प्रभु Zeus. कम मूल्य प्रतीक पनि हो, जो खेल कार्ड को प्रतीक समावेश.
यो Zeus आफूलाई यो खेल मा जंगली प्रतीकको रूपमा खेल्छ, यदि आधार खेल बेला रील मा मुलुकमा. तर, मन्दिर प्रतीक यो खेल मा जंगली प्रतीक हो र स्क्याटर प्रभु Zeus 'हातमा बिजुली बोल्ट प्रतिनिधित्व.
मन्दिर जंगली को बोनस सुविधाहरू:
मन्दिर जंगली प्रतीक को रील जुनसुकै ठाउँमा भूमि गर्न सक्छन् र यो एक राम्रो अनुक्रम गठन गर्ने जंगली द्वारा अन्य प्रतीक प्रतिस्थापन गर्न सक्छ.
प्रभु Zeus अर्को जंगली प्रतीक हो zeus III (विज्ञान खेल) अनलाइन स्लट, जो स्ट्याक्ड फारममा भूमि गर्न सक्छन्. It acts as the expanding wild symbol and covers all the positions if you get the stacked wilds of Lord Zeus.
फ्री spins सुविधा:
फ्री spins जो हरेक खेलाडी नाटकहरु लागि कुरा हो zeus III (विज्ञान खेल). यो अनलाइन स्लट थोक मा नि: शुल्क spins प्रदान गर्दछ. भूमि मात्र3यस बीच कहीं छरिन्छ 2एन र 6ध रील र तपाईं जीत हुनेछ 10 मुक्त spins. भूमि4छरिन्छ, तपाईं प्राप्त हुनेछ 25 मुक्त spins र अवतरण5छरिन्छ तपाईं अचम्मको जीत हुनेछ किनभने यो खेल मा तपाईं को लागि लकी स्पिन हुनेछ 50 एक अद्भुत 50X गुणक निःशुल्क spins. मुक्त राउन्ड spins बेला रील आफ्नो स्थान स्विच सक्छ आफ्नो जीत बृद्धि गर्न. तपाईंले धेरै पाउन सक्छौं5तपाईं भूमि यदि मुक्त spins2निःशुल्क स्पिन राउन्ड समयमा थप छरिन्छ.
WMS खेल केही साँच्चै अचम्मको बोनस सुविधाहरू थपेर Zeus अनलाइन स्लट गरेको प्रतिष्ठा कायम छ. यो स्लट छ 96.1% संग RTP दर 3.81% घर किनारा र के यो स्लट मनमोहक बनाउँछ छ!